Puntland oo war cusub kasoo saartay shirka doorashada - Caasimada Online
Home Warar Puntland oo war cusub kasoo saartay shirka doorashada
Puntland oo war cusub kasoo saartay shirka doorashada
Muqdisho (Caasimada Online) – Qoraal cusub oo ka soo baxay maamulka Puntland ayaa waxaa looga hadlay shirka arrimaha doorashooyinka ee Afisyoone, kaas oo uu fashil ku yimid todobaadkii hore, sida ay shaacisay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Afhaayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Daparani oo war kooban soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa ugu baaqay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday inuu kusoo laabto shirka Afisyoone, si loo sii amba-qaado wada-hadallada ku aadan doorashooyinka dalka.
Jaamac Daparani ayaa tilmaamay in Puntland ay weli diyaar u tahay inay sii socdaan dadaallada xalka looga gaarayo muranka hareeyey doorashooyinka 2021-ka.
Sidoo kale afhayeenka ayaa intaasi ku daray in weli ay fadhiyaan gogosha, wuxuuna ka dalbaday Farmaajo in uusan fashilin wada-hadallada doorashooyinka dalka.
“Waxa aan ugu baaqeyna Madaxweyne Farmaajo in uu gogosha kusoo laabto oo uusan fashilin Shirka Afisyooni, Anagu weli gogosha ayaan fadhinaa, wadahadalka ha fashilin ee kusoo laabo mudane miiska wadahadalka,” ayuu yiri afhayeenka madaxtooyada Puntland.
Hadalkan ayaa kusoo aadaya, xilli lagu kala kacay shirkii gogol xaarka u ahaa wada-hadallada doorashooyinka ee Afisyoone, kadib markii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka, gaar ahaan Jubbaland iyo Puntland ay isku fahmi waayee qodobada qaar ee miiska saaran, kuna aadan sida loo wajahayo shirka guud.